OWESILISA waseNtshongweni, uMnuz Sibusiso Ntombela onethalente lokudlala ibhola lezinyawo uthe isifiso sakhe ukubona iqembu lakhe liphumelela lize lifike emazingeni aphezulu kwezemidlalo. UMnuz Ntombela ungumqeqeshi weqembu elibizwa ngokuthi yiZwakala Footbal Club eNtshongweni.
Uthe esikhathini esiningi kuba nzima uma abadlali beswele njengoba ebuye akhokhe ngemali ayithola etohweni. “Kunzima ngoba iningi labadlali alisebenzi futhi ngibuye ngibambe ama toho engadini. Kwesinye isikhathi ngiyazama ukubasiza ngemali engiyithola ematohweni. Kodwa esikhathini esiningi ayenele ngoba abadlali baningi. Nginama qembu amabili okuyi qembu le-open team lapho kungakhethiwe iminyaka bese ngiba neqembu elinabadlali abane minyaka eyi-13 neyi-15 ubudala.”